ChiGermany self-sermon sentences
Muchidzidzo ichi, isu tinopa ruzivo nezve kuzvizivisa iwe muchiGerman uye nekupa ruzivo nezve isu pachedu muchiGerman, shamwari dzinodiwa. Ngatizvizivisei isu muchiGerman uye tipe ruzivo nezve isu.
Iye zvino tichadzidza maitiro ekuzvizivisa isu kune vanhu vatinosangana navo kekutanga uye maitiro ekuzivisa pamusoro pedu. Semuenzaniso, isu tichaona pazasi mitsara yekutaura zita redu muchiGerman uye kukumbira iro rimwe bato zita, kubvunza uye kutaura zera muchiGerman, kukumbira nyika yeGerman, kutaurirana kwakawanda, kukwazisa uye kutaura zvakanaka.
Semuenzaniso, muchirevo chedu chemuenzaniso, tichati ndine makore makumi maviri ekuberekwa, asi iwe unogona kushandura chikamu chemakumi maviri maererano newe, uye unogona kugadzirisa mutongo nekuunza iyo nhamba ipapo. Kana, mumutsara senge ini ndiri Balıkesirli, unogona kushandura izwi Balıkesir uye nyora kumusha kwako.
Iwe unogona kupa yakawanda mienzaniso yekuzvizivisa iwe muchiGerman, apo iwe paunodzidza zvirevo zveGerman zvemunhu pane yedu saiti, maitiro ekuita mitsara muchimiro chazvino, uye kubatanidza kwezviito zvinoshandiswa zvakanyanya, unogona kuita mitsara yakawanda zvakasiyana iwe pachako.
Ngatitangei kuzvizivisa muchiGermanyMutongo wekuzvizivisa muGermanyZivisai muGermanyChiGermany self-sermon sentencesNhanganyaya mutongo muGermany
erhan anodaro 4 apfuura
Orhan anodaro 4 apfuura
Kings anodaro 3 apfuura
naZaza anodaro 3 apfuura
moyo murefu anodaro 3 apfuura
Bata Hakan zvakananga anodaro 3 apfuura
cemile anodaro 3 apfuura
Moving Aircraft anodaro 3 apfuura
dilan anodaro 3 apfuura